तपाईं वर्ष विवाह गरिएको छ कि छैन भनेर, वा सम्बन्ध प्रारम्भिक चरणहरु मा अझै पनि छन्, हरेक जोडी सँगै बिताएको गुणस्तरीय समयबाट फाइदा लिन सक्छ. यो प्रणय दिवस को लागि प्रयास गर्न विशेष गरी राम्रो. रेल द्वारा यात्रा रोमान्टिक सुरु गर्न सही तरिका हो र सुहागरात Getaway आफ्नो प्रेम एक साथ. को देहात मार्फत वा पहाडमा चुपचाप गति. विगतमा आकर्षक ट्राभर्स, प्राचीन सहर वा हिमनदीय को किनारा साथ ताल. यहाँ पनि शीर्ष5युरोप सबैभन्दा रोमान्टिक रेल यात्राको. प्रत्येक प्रणय दिवस लागि विशेष कुरा प्रदान गर्दछ.
लन्डन गर्न भेनिस हाम्रो पहिलो रोमान्टिक ट्रेन यात्रा छ
फ्रान्सको माध्यमबाट रेलमा कुरा गर्दै गर्दा तपाईं देशको प्रसिद्ध र color र प्रकाशमा पर्नुहुनेछ. कोटे Azur नीलो पानी गर्न बैजनी लैवेंडर क्षेत्रहरू देखि. सुनको सूर्यका जादुई यो सबै immerses जो बाटो मा marvel, तपाईं एक व्यवहार लागि हुनुहुन्छ. सबै को सबै भन्दा रोमान्टिक शहर मा शुरू, पेरिस, तपाईंको रेल यात्रा नाटकीय तटों को काल्पनिक coastlines पारित हुनेछ. तपाईं पनि गर्नुहुनेछ सुरम्य गाउँहरू हेर्नुहोस् र सूर्यमुखी र लैवेंडर प्रोभेन्स को क्षेत्रहरू.
यस सानो खण्ड रेलवे पाँचवटा इटालियन गर्दछ को Riviera गाउँहरु Cinque Terre नाटकीय फेसनमा. रेल यात्रा प्रत्येक तरिका एक घण्टा भन्दा कम छ, त्यसैले रेल एक तरिका लिन. त्यसपछि तपाईं खर्च गर्न सक्छन् दिन पैदल यात्रा अद्भुत गाउँ-जडान फिर्ता तपाईं कहाँ सुरु गर्न ट्रेल्स. यो रेल यात्रा को Ligurian समुद्र को दृश्य साँच्चै शानदार छ, प्यास्टेल गाउँमा, terraced दाखबारी साथै जीवंत क्षेत्रहरू.
ज्यूरिख तपाईंको रोमान्टिक रेल यात्रा सुरु. Bahnhofstrasse यात्रा, तिनी हरु मध्ये आकर्षक किनमेल सडकमा संसारमा, र एक स्मृति चिन्ह किन्न. धेरै-प्रेम Kunsthaus कला मा भ्यान Gogh र Monet को उल्लेखनीय काम मा marvel ग्यालरी. त्यहाँ जोडीहरु धेरै गर्न को लागी ज्युरिख मा दृश्य मा snuggling अघि रेल सवारी नाइस गर्न. यस उल्लेखनीय तिर लेक ज्यूरिख को बैंकहरू साथ यात्रा अल्पाइन दृश्यहरु. तपाईं पनि सुन्दरी पहाड Meadows र सुन्दर दृश्य पास छौँ. के थप रोमान्टिक हुन सक्छ?
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#रोमान्स लन्डन रोमान्टिक रोमान्टिडेस्टिनेसनहरू ट्रैवलफ्लोरेन्स ट्रैभलिस ट्राभेलपारिस ट्राभ्रोम यात्रा